Induction mota, matatu Phase Induction mota, Kuputika Proof mota - Leadrive
Zhejiang Leadrive Magetsi Motor Co, Ltd.(pano inonzi "Lijiu Motor") iri muTaizhou, Zhejiang, chivako chehupfumi hwenyika. Kuvimba nedenderedzwa hombe rehupfumi reYangtze Rwizi Delta, iyo nharaunda nzvimbo yakapfuura. Inongova makiromita maviri chete kubva kuHuangyan Airport uye makiromita gumi kubva kuHaimen Port. Iyo yekufambisa iri nyore kwazvo. Neboka rekuvandudza hutungamiriri, yazvino manejimendi sisitimu, yepamusoro yevashandi, zvigadzirwa zvekugadzira zvakakwana, zvigadzirwa zvekuongorora zvakakwana, simba rakasimba rehunyanzvi, mhando yezvigadzirwa, yepamusoro tekinoroji yekugadzira, hwakakwana mhando sisitimu, yakafambiswa neR & D kugona uye nehunyanzvi timu yekutengesa, Lijiu Motokari inokurumidza kuve nyeredzi iri kusimuka muindasitiri yeChina yemotokari. Iyo yekutengesa network yakapararira kumatunhu anopfuura makumi maviri nemaguta kuNortheast, Northwest, North China, Central China, South China, Southwest neEast China. Mufananidzo wechiratidzo wakadzika midzi mumoyo yevanhu, uye wakawana kufarirwa nekurumbidzwa kwevatengesi vakasiyana.
Tinokukoka Nomwoyo Wose Kuti Ugadzire Remangwana Pamwechete! Kukosha Kunobva Mukusika!
YXP akatevedzana yepamusoro-tembiricha moto-kurwa exhau ...
Simba remagetsi kumhanyisa mota yemagetsi pamusoro pemakore gumi ingangoita zvakapetwa makumi matatu mutengo wekutanga wekutenga. Nesimba rekushandisa zvine chekuita neruzhinji rwehupenyu hwese, Marek Lukasz ...
Asynchronous mota musika wekusimudzira revenu ...
Iyo yazvino vhezheni ye2020 yemusika wekudzidza paAsynchronous Motor Market inosanganisira 103 nemusika wedata Matafura, maChati, maGirafu, uye maFigure ayo ari nyore kunzwisisa nekuratidzwa kwakadzama mune ...